दलान नेपाल : मधेशको मुड
at 2:06 AM Posted by Dalan
म निर्वाचन भन्दा पहिला नै मधेशी पार्टीहरु १०/१२ सिट भन्दा वढी जित्दैनन भनेर भनेका थियौं । काठमाडौमा रहेको मधेशी नेताहरु र बुद्धजीवीहरुलाई पत्याएर लागेन । उनीहरु अवस्था साकारात्मक नै छ भनेर भनिरहे । हेर्नुस काठमाडौमा अहिले तीन तप्काका मधेशी समुहहरु छन । एउटा मधेशी नेताहरुको, अर्को त्यसको आसेपासेहरुको र तेस्रो बुद्धजिवी पत्रकारहरुको । नेताहरु मधेशको वास्तविक धरातलवाट कटीसकेका छन । उनीहरुका आसेपासे उनीहरुकै जयजयकारम व्यस्त छन । र याहा मधेशी कहलिएका बुद्धजिवी र पत्रकारहरुमा एक दुई जना वाहेक पनि सबै मधेशको भावनावाट टाढिसकेका छन । उनीहरुले हौवा पिटदै हिडे कि मधेशमा मधेशी पार्टीहरु यत्रो संख्यामा त उत्रो संख्यामा आउछ भनेर ।
चुनावी अभियान तीव्र रुपमा भईरहेकै बेला म संग सप्तरीमा भेटन आउनु भएका दिपेन्द्र झा र प्रशान्त झालाई महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादव जित्ने अवस्थामा नभएको बताएका थिए । उहांले त्यसलाई खासै वास्ता गर्नु भएन । हेर्नुस मधेशमा यसपाली काग्रेस एमालेले पाएको मत विश्वासको पनि होईन तर विगत चार पांच बर्षमा मधेशी नेताहरुले गरेको क्रियाकलापका कारण आम मधेशीहरुमा यस पटक देखाईदिनु पर्छ भन्ने भावना थियो । त्यसको फाइदा मात्रै कांग्रेस, एमालेले उठाएका छन । काग्रेस एमालेप्रति मधेशमा अहिले पनि भरोसा छैन कि उनीहरु आफनो मुद्धाका लागी यी पार्टीहरुले काम गर्छ भनेर ।
काग्रेस एमालेले आक्रोशको मत पाएको छ । विश्वासको होईन त्यसमा ढुक्क हुनुस । निर्वाचनको नतिजापछि केही साता मधेशमा जताजतै निराशा देखिन्थ्यो र मधेशीहरु सबै मधेशी नेता सक्यो भनेर दुख मनाउ गथ्र्यो । तर समानुपातिकको खेल सुरु भएपछि मधेशीहरुमा थप आक्रोश पैदा भएको छ । म गत साता मात्रै राजविराज, जनकपुर, मंलगवा, गौर, कलैया र विरगंजमा त्याहाका बुद्धजिवीहरुसंग अन्तक्रिया गरेर फर्केका र्छौ । तपाई लाई आश्चर्य लाग्ला त्याहा उठेका प्रश्नहरु सुन्दा ?
मंलगवामा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीकै समर्थक एक जना बुद्धजिवीले प्रश्न उठाए कि मधेशी जनताको समर्थन के नेताहरु घरायसी व्यहवार चलाउनका लागी हो ? उनले ठाकुरजी उमाकान्त झा लाई एक बर्ष अगाडी मधेशी कोटामा मन्त्री बनाउनु भयो, अहिले उहाकी पत्नी ईन्द्रा झाई सभासदमा मनोयन गर्नुभयो । यीनीहरु के पार्टी र मधेशका लागी कहिल्यै सक्रिय थिए र ? कुरा चाही खाली उमाकान्त झा र इन्द्रा झा को छोरा संग ठाकुरजीको छोरीको विहे हुदै छ ।
राजविराजमा सदभावना पार्टीका एक जना पुराना नेताले सभामै खुटावाट जुत्ता निकाले, जुत्ता देखाउदै भाषण गरे । राजेन्द्र महतोलाई यसैले सम्मान गर्छु भनेर । उपेन्द्र यादवको घडेरी जोडेको कुरामा ठाउ ठाउमा त्यतीकै उठने गर्छ । यी नेताहरु याहा जतीसुकै एकिकरणको अहिले कुरा गरेपनि मधेशमा त्यसलाई मानिसहरुले फेरी मन्त्री बन्नकै लागी यो खेल भईरहेको बताउछन । एकिकरणलाई पनि साकारात्मक रुपमा हेरिएको छैन ।
तर एकिकरण संससद भित्र एउटा हुल चाही बन्ने छ तर त्यो खासै महत्वपुर्ण सावित हुने वाला छैन । अब विस्तारै संविधानसभाले काम थालेपछि याहाको प्रतिगमन छताछुल्ल हुदै जानेछ । र मधेश फेरी सडकमा आउने छ आफनो मुद्धाका लागी त्यतीवेला यी दलहरु पनि सडकमै आउछ, त्यसमा कुनै दुईमत नै छैन । मधेशको मुद्धा संसद वा सरकारवाट कुनै पनि हालतमा सम्बोधन हुदैन त्यसमा म ढुक्क छु र त्यही कारण म यो सबै प्रक्रियावाट टाढा छु ।
दाउर सुरवालको सन्देश मधेशको चौक चौकमा फैलिसकेको छ । गाउ गाउमा त्यसको चर्चा शुरु भईरहेको छ । लोकसेवा धेरै ठाउमा मधेशी कोटा बन्द गर्न सुरु गरिसकेको कुरावाट मधेशी युवाहरु अनभिज्ञ छैन । तपाई हेर्दै जानु अब सरकार बनेपछि र संविधानको मुद्धामा काम शुरु हुने वितिकै सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ । र त्यसले आन्द्योलनको वातावरण निर्माण गर्ने छ । हामी त्यसका लागी तयार छौ ।
गएको ४ महिना देखि लगातार मधेशमै रहदै आएका तराई मधेश राष्टिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ता आकल झुकल मात्रै काठमाडौमा देखिन्छ । काठमाडौ आएको मौकामा आज विहान उनीसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित
Unknown November 28, 2014 at 3:30 PM